सिक्किम विलयपछि बीपी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो विष्णु आचार्य – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७३, २७ साउन बिहीबार ०२:३० August 11, 2016 1066 Views
एकजना चिन्तक र लोकतन्त्रवादीका नाताले देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्दैछ । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट गठबन्धनले निकास दिन सहज हुँदैन ?
काङ्ग्रेस पार्टी आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बाटोमा हिँडिरहेको छैन त ?
त्यसो भए राजनीतिक गत्यावरोधको निकास निस्कन्न त ?
प्रसङ्ग बदलौँ, कोसी बाँधका विषयमा भारतीय पक्षबाट चलाइएका हल्लाहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हालै कतिपय भारतीय सञ्चारले नेकपा माओवादीलाई कहिले चीनसँग त कहिले आतङ्कवादी सञ्जालसँग जोड्ने गर्नुको कारण के होला ?
ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौताहरूको अवस्था के होला ?
नेपाली काङ्ग्रेस कोइराला परिवारको आदर्सबाट मोडिन खोजेको हो ?
नेपाली काङ्ग्रेस वैचारिक रूपले नै २०६२÷०६३ को आन्दोलन पूर्वतिर डोलायमान हुँदैछ भन्छन् नि ?
अस्थिरता भएर गयो । यो संविधान खारेज वा निष्क्रिय भएर शून्यता आयो भने नयाँ ढंगले सोच्नु पर्दा के होला म भन्न सक्दिनँ । तर यो संविधान र संसदीय प्रणाली कायम रहेसम्म २०६२÷०६३ भन्दा पछाडि फर्किने सम्भावना छैन ।
प्रसङ्ग बीपीतिरै मोडौँ, बीपीलाई भारतपरस्त नेताको चस्माले हेर्नेहरूको पनि कमी छैन । बीपीलाई नजिकबाट हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्थ्यो ?
सत्तामा बस्नेहरूले त्यो आरोप लगाउने गर्छन् । बीपी अब रहस्य नभएर खुला पानाजस्तै हुनुहुन्छ । नागरिकले स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्छन् । मलाई लाग्छ, बीपी भारतका लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन हुनुहुन्थ्यो । बीपीले ‘भारतमा बसिरहनुभन्दा विष, नेपाल फर्किनु आत्महत्याजस्तै हो’ भन्नुभएको थियो । देशको अस्तित्व नै खतरामा परेको महसुस गरेपछि उहाँ मृत्युदण्डको खतरा मोलेर देश फर्किनुभएको हो । त्यसबेला बीपीले एउटा लिखित सन्देश वितरण गर्नुभएको थियो । त्यही पर्चा बाँड्दा म गिरफ्तार भएको थिएँ । त्यसबेला भारतमा इन्दिरा गान्धी सत्तारूढ थिइन् । बीपीलाई नेपालमा मार्लान् भनेर रोक्न पटना हवाईअड्डामा इन्दिरा आफैँ पुगेकी थिइन् । चर्चामा त्यति नआएको कटु यथार्थ के हो भने बीपीको निकटता नेहरू र गान्धी परिवारमा थिएन । बाहिरबाट हेर्दा गान्धी र नेहरू परिवारसँग भएजस्तो देखिने भावनात्मक निकटता भने मोरार्जी देसाईं, आरके नारायणहरूसँग थियो । उनीहरू नेहरू परिवारका विरोधी थिए । त्यसकारण पनि बीपी भारतको सत्ता पक्षभन्दा विपक्षको नजिक हुनुहुन्थ्यो । यो कुरा दिल्लीको संस्थापनले रुचाएको थिएन ।
राजाको विषयलाई लिएर बीपी सधैँ विवादमा तानिनुहुन्छ नि ?
तपाईं अहिले बजारको बिकाउ राजनीतिक मालका रूपमा हुनुहुन्न । २०४६ सालको ठमेल, चाक्सीबारीको चर्चित सभामा पनि बीपीसँग निकटताका कारण मन्तव्य दिनुभएको थियो । तसर्थ इन्दिरा गान्धीले बीपीसँग लेन्डुप दोर्जेको अपेक्षा गरेपछि बीपी स्वेदस फर्केको भन्ने पनि गरिन्छ ।
बीपीसँगको निकटताका कारण त्यो पाटोलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायती व्यवस्थाले जित्ने सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ भारतपरस्तहरू नै आएको देखिन्छ त ?
जनमतसङ्ग्रहमा पञ्चायतले जित्यो । सरकारको नेतृत्व गर्न भारतपरस्त सूर्यबहादुर थापा आए । पञ्चायती व्यवस्था भारतको नियन्त्रणबाहिर थिएन । भारतपरस्तलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आफू सुरक्षित भइन्छ भन्ने सोचाइ राजामा पनि देखिन्थ्यो । नेपालका हरेक आन्दोलन र विद्रोहपछि भारतपरस्त शक्ति नै सत्तारुढ भएको देखिन्छ । विदेशीको आडभरोसामा भएको आन्दोलनबाट अन्तिम फाइदा उसैले लिन्छ । २०३६, २०४६, २०६३÷०६३ मा सधैँ त्यही चक्र घुमिरहेको छ ।
बीपी र साम्यवादका बीचको सम्बन्ध अथवा कम्युनिस्टबारे बीपीको सोचाइ कस्तो थियो ?